प्लस टु क्रिकेट : ब्रम्हास्मी, ग्ल्यासीयर, ह्वाईट हाउस र ब्लुबर्ड कलेज सेमिफाईनल भिड्ने Letzcricket - Serving Nepali Cricket
प्लस टु क्रिकेट : ब्रम्हास्मी, ग्ल्यासीयर, ह्वाईट हाउस र ब्लुबर्ड कलेज सेमिफाईनल भिड्ने
1st April 2019, Monday
नेक्सस क्रिकेट एकेडेमीको आयोजनामा काठमाण्डौको मुलपानी क्रिकेट मैदानमा संचालित अस स्टडीज प्लस टु टि ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता का २४ वटै लिग चरणका खेलहरु सोमार सम्पन्न भएका छन । पोल ए बाट ब्रम्हास्मी, पोल बि बाट ह्वाईट हाउस, पोल सी बाट ग्ल्यासीयर र पोल डि बाट ब्लुबर्ड शिर्ष स्थानमा रहदै सेमिफाईनल पुगेका छन । मंगलबार ब्रम्हास्मी र ग्ल्यासीयर ले सेमिफाईनलको पहिलो खेल खेल्ने छन भने दास्रो खेल ह्वाईट हाउस र ब्लुबर्ड बीच हुनेछ ।
लिग चरणको अन्मि दिनको पहिलो खेल ब्लुबर्ड कलेजले नेक्सस उच्च मा.बि. रौतहट लाई ५३ रनले पराजित गरेको छ भने मोर्गन कलेज ले आमेगा कलेज जुद्ध मा.बि.रौतहट लाई २१ रनले पराजित गरेको छ ।
पहिलो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको ब्लुबर्ड कलेज ले निर्धारित १५ ओभर खेल्दै २ विकेटको क्षेतीमा १३९ रन बनाएको थियो । ब्लुबर्डका म्यान अफ द म्याच घाषित दुर्गेश थापाले ४४ बलमा ६९ रन, सचिन लेखकले २७ र बिबेक रानाले २२ बनाएका थिए ।
बलिङ तर्फ नेक्ससका आशिष सुनुवरले १ वीकेट लिएका थिए ।
जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको नेक्ससले १५ ओभरमा ९ विकेट गुमाउदै ८६ रन बनाउदा पराजय भोगेको थियो । नेक्ससका समिर सेनले ३२ रन र रमेश भट्टले २५ रन बनाएका थिए ।
बलिङ तर्फ ब्लुबर्डका सुबास खत्री,गौरब कटुवाल र संकर पोखरेलले समान ३÷३ विकेट लिएका थिए ।
दोस्रो खेल : मोर्गन कलेज २१ रनले बिजयी
सोमबारै सम्पन्न दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको मोर्गन कलेजले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउदै १३८ रन बनाएको थियो । मोर्गनका आयुषमान बलमेले ४६ बलमा ५५ रनको योगदान दिदा हेमन्त धामीले ३९ रन बनाएका थिए । बलिङ तर्फ रौतहडका राजेश यादवले २ विकेट लिएका थिए ।
लक्ष्य पच्छया्उदै जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको जुद्ध मा.बि. रौतहटले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउदै ११७ रन बनाएकोे थियो । रौतहटका लागि करण शाह ले २५ रन र बब्लु नायकले २४ रन बनाएका थिए ।
बलिङ तर्फ मोर्गनका सुबास ढुङगेलले २ विकेट लिएका थिए । मोर्गनका हेमन्त धामी म्यान अफ द म्याच घोषित भएका थिए ।